Jirama Fiberglass mahazatra
Fiberglass harato dia eo amin'ny fototry C-vera fiberglass tenona lamba, ary avy eo dia nopetahany rano alkali-mahatohitra. Fiberglass harato no fitaovana fananganana mety indrindra ho an'ny EIFS (rafitra insulation sy rafitra famaranana ivelany), be mpampiasa amin'ny fanamafisana ny rindrina, tafo tsy tantera-drano, manamafy simenitra, plastika, bitumen, lalotra, marbra, mozika, sns. Afaka mamokatra lanja sy habe ary loko miloko izahay. habe harato araka ny takinao. Fiberglass harato toetra: 1. fahamarinan-toerana simika: asidra resista ...
Famaritana fohifohy: volon'ny fiberglass ho an'ny mosaic dia tenona avy amin'ny kiran'ny veromanitra C-vera, ary mifono fonosana mahazaka alkaly. Fampiharana: Ampiasaina ao ambadiky ny mosaic sy ny vato ho fanamafisana. Tombony: Ny harato dia mahazatra sy fisaka, mba hahafahany mifikitra tsara kokoa amin'ny mozika na vato, satria isika irery no mamokatra ilay kofehy fiberglass mba hahafahantsika mifehy tsara ny kalitao ary mahay ny asanay. Mampiasa fonosana mahazaka alkaly avo lenta izahay mba hatanjaka tokoa ny harato, ary ny coati ...
Tape fametahana tena
Ny fantsom-pirinty vita amin'ny vera dia fantsom-by copolymer acrylic mizara roa ny sakany sy ny halavany, ny fitaratra simika amin'ny fibre fitaratra ary tsy mora entina, ho an'ny fanavaozana ny rindrina, haingon-trano, triatra rindrina, lavaka ary rindrina maina. Azonao atao koa ny mametaka takelaka gypsum, simenitra ary fitaovana fananganana hafa hisorohana tanteraka ny triatra amin'ny rindrina sy ny zorony. Mandritra izany fotoana izany, dia azo ampiasaina miaraka, fiberglass tena-adhesive ny tarika, ny fametrahana haingon-trano maritrano mora kokoa ...
Kofehy vera: kiran-kofehy vita amin'ny vera C&E dia karazana kofehy singel na kofehy fiberglass multi plies miaraka amin'ny toetran'ny tanjaka avo, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny hafanana ary ny fihoaram-bolo ambany sns. ny orinasanay dia afaka manome tari-dàlana samy hafa amin'ny fihodinana, plies, kofehy matevina misy endrika hafa amin'ny bobbins toy ny bobbin-tavoahangy plastich bobbin, bobbin-taratasy ary bobbin-kônitra. TYPE: ny kofehin-kazo fiberglass dia misy filitera E-Glass voafaritra voafaritra amin'ny ...
fantatra amin'ny anarana hoe tribulus iron, tsilo, tsilo. Ny tadiny baroritra dia voahodidin'ilay milina tady barbed mandeha ho azy. Ny tariby fototra amin'ny tariby PVC dia azo tariby na tariby mainty. Karazana vokatra: tokana - visy tariby - fanjairana ary indroa - vodi-tariby - fanjairana. Akora matevina: tariby vy ambany kalitao avo lenta. Ny fizotran'ny fitsaboana ambonin'ny tany: ny fantsona elektrika, ny fantson-drano mafana, ny plastika, ny famafazana plastika. Fampiharana: ampiasaina amin'ny fiarovana mitokana ny ...
Ny tariby misy hareza dia karazana fitaovam-piarovana maoderina voaforona kofehy vy maranitra sy tariby avo lenta. Ny tariby misy alikaola dia azo apetraka hahatratrarana ny vokatry ny fampitahorana sy ny fijanonana amin'ireo mpanelingelina perimeter mahery setra, miaraka amin'ny fanapahana sy fanapahana ny hareza hareza eo an-tampon'ny rindrina, ary koa ireo endrika manokana mahasarika ny fiakarana sy ny fikasihan-tanana. Ny tariby sy ny kofehy dia nohosorana mba hisorohana ny lozika. 1. Fitaovana: ravina mafana nandrakotra nandrisika Hot Dippe ...
Azo ampiasaina amin'ny sakana fanaraha-maso ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny làlambe, lalamby, làlambe sy fitaterana hafa ary fotodrafitrasa izay mandalo ny faritra an-tanàn-dehibe, ary takelaka manintona feo ho an'ny insulation feo sy ny fihenan'ny tabataba amin'ny rindrin'ny trano, ny efitrano misy ny generator, ny tranon'ny orinasa ary ny loharanom-baovao hafa; azo ampiasaina amin'ny tranobe Azo ampiasaina amin'ny valindrihana, valin-drindrina, harato fanamafisam-peo, fitaovana fanamafisam-peo harato fanamafisam-peo; takelaka orifice voaravaka tsara izay azo ampiasaina amin'ny ...
Ny vy vita amin'ny karbaona no manitatra indrindra ny harato ara-toekarena indrindra amin'ireo fitaovana vy. Fitaovana: vy vita amin'ny karbaona. Isan-karazany: harato metaly kely sy salantsalany ary mavesatra. Misokatra amin'ny endrika diamondra, hexagonal na endrika manokana. Ampiasaina: Ampiasaina amin'ny beton amin'ny tranobe sy fananganana, fikojakojana ny fitaovana, fanaovana zavakanto sy asa tanana, efijery fanaronana ho an'ny tranga misy ny kilasy voalohany. Fencing ihany koa ho an'ny làlambe, studio, làlambe. Ny vy vita amin'ny karbaona nitarina mavesatra dia azo ampiasaina ho dingana mesh ...
1.Material: 1) tariby vy tsy miova (201,202,302,304,304L, 310,316,316L) 2) tariby vy be karbaona, vy kely karbaona, vy misy karbaona medium, tariby vy Mn. 3) tariby vy nandrisika, tariby vy nandrisika, tariby vy tsy ferrous. Misy fitaovana hafa azo alaina avy amin'ny fangatahana. 2.Application: Crimped wire mesh dia ampiasaina ho fefy na sivana amin'ny indostrialy marobe; Adidy mavesatra Crimped wire mesh dia antsoina hoe Quarry Mesh, ampiasaina amin'ny efijery amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ozinina arintany, fananganana ary indostria hafa. 3.Supply fo ...